Nhau - Ye19 Beijing Kuongorora Uye Kuyedza Yedzidzo Ripoti Uye Exhibition
Huiyu fluid yakaenda BCEIA2019 uye ichaenda BCEIA2021 muBeijing. . Shanyira dumba raHuiyu, 6A011 #, kuti udzidze nezve yakakwira-inoshanda sampuli Peristaltic Pump yekurapa mvura, murabhoritari, kwesainzi uye nekushandisa.
Uye zvakare, uya uye ushanyire kudumba redu kuti uwane rumwe ruzivo. Isu tichakupa muongororwo wekuti muyenzaniso weHuiyu unoshanda sei uye nekutsanangura mashandisiro avanogona kuita kune zvakajairika mashandisirwo vachishandisa akanakisa maitiro akave akavakirwa zvichibva pazviitiko zveKambani.
Saka, famba uchienda pamusoro kune dumba # 6A011 uye uti mhoroi kuhuiyu!
Inotsigirwa neCAIA (China Association for Instrumental Analysis), musangano weBeijing uye Exhibition yeA Instrumental Analysis (BCEIA) musangano wakasarudzika uye unoremekedzwa wepasirose wekuratidzira kuChina. Mushure mekuchengetwa nekuvandudzwa kweanopfuura makore makumi matatu, BCEIA iri kuramba ichizivikanwa pasi rese, paine varatidziri nevatori vechikamu vanobva kunyika dzinopfuura makumi maviri nemakumi matatu zvakateerana, kuti vatore chikamu muchiitiko chikuru panguva mbiri. Huwandu hwevatori vechikamu hwakawedzera zvishoma nezvishoma uye muna 2017 huwandu hwevatori vechikamu vakanyoreswa hwakapfuura zviuru makumi maviri nezvishanu, uye nyanzvi dzakanyoreswa dzeMusangano weVadzidzi dzakasvika zviuru mazana matatu nemazana mana.
Kushanda sedandaro rekuratidzira tekinoroji nyowani, zviridzwa zvitsva nemidziyo mitsva, BCEIA Exhibition yagara ichikwezva kufarira kwepasirese kubva kune nyanzvi, vadzidzi uye sainzi uye tekinoroji vashandi. Mumakore achangopfuura, avhareji yeanopfuura zviuru zvitatu zvezviridzwa nemidziyo zvakaratidzirwa uye zvakaratidzwa pane imwe Exhibition munguva yakapfuura. Varatidziri vanotaurirana nevatori vechikamu mumunhu pane epamberi ekushandisa ekuongorora mazano, zvigadzirwa uye matekinoroji uye mhinduro.
Musangano wevadzidzi wakakosha uye wakakosha chikamu che BCEIA, uye yakagara yakazvipira kusimudzira matekinoroji esainzi. Musangano uyu ikozvino une hurukuro yehurukuro, zvikamu gumi zvakafanana, maforamu uye misangano pamwe chete uye zviitiko. Musangano uyu unosanganisira dzakasiyana siyana misoro inosanganisira hurukuro pamusoro pemisimboti mitsva, nzira uye matekinoroji.
Musangano wevadzidzi musangano unokudzwa wevanyanzvi vanoremekedzwa mumunda. Nyanzvi kubva kumatunhu epasirese ane mukurumbira uye masosi akapa hurukuro pamisoro yenyaya dzinoitikakawanda mumunda wekuongorora.
Musangano uyu une mukurumbira wakanaka uye urikutora chinzvimbo chakakosha kusimudzira kuchinjana kwesainzi uye tekinoroji pamwe nekuvandudza kwesainzi uye matekinoroji ekugadzira michina kuChina.
"Analytical Science Inogadzira Ramangwana", tibatane nesu kumusangano unouya weECAIA wezvidzidzo uye uwane kurudziro!